Izinto eziguquguqukayo eziphilayo (ii-VOCs) ziikhemikhali eziphilayo ezinengcinezelo ephezulu yomphunga kubushushu begumbi eliqhelekileyo. Uxinzelelo lwabo lomphunga oluphezulu lubangelwa yindawo ephantsi yokubilisa, eyenze ukuba inani elikhulu leemolekyuli zonyuke okanye zithambe ukusuka kulwelo okanye ziqine ukusuka kwikhompawundi kwaye zingene kumoya ojikelezileyo. Ezinye ii-VOC ziyingozi kwimpilo yabantu okanye zibangela ingozi kwindalo esingqongileyo.
Umgaqo osebenzayo wonyango:
Indibaniselwano yeVOCS yokunyibilika kunye neyunithi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo isebenzisa itekhnoloji yefriji, ukupholisa ii-VOCs ngokuthe ngcembe ukusuka kubushushu be-ambient ukuya -20 ℃ ~ -75 ℃ .Ii-VOC ziyafunyanwa emva kokuba zixutywe zaza zahlulwa emoyeni. Yonke le nkqubo inokuphinda isetyenziswe, kubandakanya ukujiya, ukwahlula kunye nokufumana kwakhona ngokuqhubekayo. Okokugqibela, irhasi eguqukayo ikulungele ukukhutshwa.
Ukugcinwa kweoyile / kweekhemikhali
Ioyile / ikhemikhali port
Ii-VOCs ze-condensate kunye neyokubuyisa iyunithi yamkela ifriji yoomatshini kunye nokupholisa okuninzi okuqhubekayo ukunciphisa ubushushu beVOCs. Ukutshintshiselana ngobushushu phakathi kwefriji yefriji kunye negesi eguqukayo kwindawo yokutshintsha ubushushu eyilelwe ngokukodwa. Isikhenkcisi sithatha ubushushu kwirhasi engazinzanga kwaye senza ubushushu baso bufike kwindawo yombethe kuxinzelelo olwahlukileyo. Irhasi eguqukayo yendalo iyajijwa ibe lulwelo kwaye yahlulwe emoyeni. Inkqubo iyaqhubeka, kwaye i-condensate ihlawuliswa etankini ngqo ngaphandle kongcoliseko lwesibini. Emva kobushushu obusezantsi obufudumeleyo bufikelela kubushushu obujikelezileyo ngotshintshiselwano ngobushushu, ekugqibeleni buyakhutshwa kwisiphelo.
Iyunithi isebenza kunyango lwegesi efumanekayo e-organic, edibene ne-petrochemicals, izinto zokwenziwa, iimveliso zeplastiki, izixhobo zokwaleka, ukuprinta kwephakheji, njl njl. Eli candelo alinakuphatha kuphela i-organic yegesi ngokukhuselekileyo kwaye landise ukusebenza ngokukuko kwezixhobo ze-VOCs kakhulu kodwa izibonelelo zoqoqosho. Idibanisa izibonelelo zentlalo kunye nezibonelelo zokusingqongileyo, ezinegalelo kukhuseleko lokusingqongileyo.